ukuvavanya ngaphandle kwesibonelelo se-qa
Eyona Agile Ukuvavanywa ngaphandle kwesibonelelo seQA
Ngaba kunokwenzeka ukwenza uvavanyo olwaneleyo lwesicelo sesoftware kunye nabaphuhlisi kunye nee-BAs kwaye akukho mthombo weQA?
Kukho izikolo ezibini zokucinga apha:
Enye yinkolelo yokuba zonke iibhugi zinxulumene nekhowudi kwaye ukuba unepesenti ephezulu kakhulu yokujonga ikhowudi yakho, ke ngokuqinisekileyo akufuneki ubenazo iimpazamo. Njengabavavanyi, sonke siyazi ukuba ayiyonyani le!
Enye inkolelo kukuba wenza uvavanyo olwaneleyo lweyunithi kwaye wenza nokudityaniswa, inkqubo kunye novavanyo lokwamkelwa komsebenzisi ukuqinisekisa ukuba isicelo silungele injongo. Ngelixa oku kubonakala kungumbono olungileyo, ayisebenzi njengoko abaphuhlisi kufuneka bafumane ukufaka iikhowudi kumanqaku amatsha!
Zombini ezi nkolelo zigqithile.
Ukuvavanya ikhowudi yakho kunokusebenza, kuba njengomphuhlisi uyazi ukuba yeyiphi indawo yekhowudi yakho entsonkothileyo kwaye ekunokwenzeka ukuba ibe yibhokhwe, ke uya kugxila kuloo ndawo. Kwakhona, ukwazi ukuba akusekho QA, unyanzelekile ukuba ubhale ikhowudi esemgangathweni, njengoko omnye umphuhlisi eyibeka
Kumsebenzi wam wokuqala, bendingenayo i-QA. Kuxhomekeke kum ukuqinisekisa ukuba eyam ikhowudi ibinomgangatho ngokwaneleyo ngaphambi kokuba ndiyikhulule, kwaye loo nto indoyikisile ngokwaneleyo kangangokuba ndiye ndafunda ukubhala ikhowudi esemgangathweni (oko kuthetha ukuba uvavanya ikhowudi yakho kakuhle, usenza eyakho i-QA).
Ngaba uvavanyo loPhuculo lwanele?
Ndiyakholelwa yintshukumo elungileyo yokukhuthaza abaphuhlisi besoftware ukuba bathathe ubunini bekhowudi yabo, nangona kunjalo xa uvavanya eyakho ikhowudi, ungaphaya kokuphosa lonke udidi lweebugs.
Unokuba nokusebenza ngokukuko ekubambeni iintlobo zeebugs onokucinga ngazo, kodwa ezo zihlala zizezona bugs zilula ukuzibamba kwindawo yokuqala. Iimvavanyo ozibhalela zona azisoze zenze umsebenzi olungileyo wokubamba iimpazamo ekucingeni kwakho malunga nokuba ikhowudi kufuneka yenze ntoni, zeziphi iintlobo zongenelelo ekufuneka zisingathiwe, njl.njl. Ukuqala kwiseti efanayo yokucinga.
Ukusebenza njengovavanyo oluzenzekelayo kwakuthetha ukuba kuya kufuneka ndigxile kuvavanyo kunye nokwenza iikhowudi zombini ngaxeshanye, kwaye bendihlala ndizabalaza! Xa bendifaka iikhowudi kwiimvavanyo, bendifuna nje ukuqinisekisa ukuba ikhowudi iyaphumeza kwaye ndenze uvavanyo luphumelele, khange ndikhathazeke kakhulu malunga nokuba loluphi olona vavanyo ngoba eyona nto bendijonge kuyo kukufaka iikhowudi. Kungekudala ndiye ndaqonda ukuba ndizenzela iimvavanyo ezingenamsebenzi ezinganiki xabiso.
Elinye inqaku elibalulekileyo ekufuneka uliqaphele kukuba ukuvavanywa kweyunithi kuphela kubamba iimpazamo zenkqubo yekhowudi, ukuvavanywa kweyunithi akuboni ukusilela kwisicelo, oko kuthetha ukuba une-100% yokugubungela ikhowudi, oko akuthethi ukuba isicelo asinasiphene.
Ngelixa kuhlala kufanelekile ukuvavanya ikhowudi yakho kuvavanyo lweyunithi ngaphambi kokuba idluliswe, kubalulekile ukuba ube neseti yesibini yamehlo kuyo ukusuka kwindlela yokuziphatha. Rhoqo sisondele kakhulu kwikhowudi ukuba siyibethe kakuhle kwaye siyithobele kumacala angaqhelekanga, kwaye abantu abalungileyo be-QA banobuchule bokwenza loo nto. Ukuvavanywa kwinqanaba lenkqubo ngesinye iseti sabasebenzisi esifana nabavavanyi sinokuhlala siveza iibugs ezinomdla kakhulu.
Kwakhona, ayisiyiyo yonke into malunga nokuvavanywa kokusebenza. Kuya kufuneka sikhathale kwaye sikhathazeke malunga nokuvavanywa kokusebenza, ukuvavanywa kokhuseleko, ukuvavanywa kokusebenziseka, njl.njl., Efunekayo ukuba sifuna ukukhupha isoftware ekumgangatho ophezulu.
Kutheni sisafuna iQA?
Abavavanyi ngamanye amaxesha babonwa njengebhotile kuyo yonke imibhobho yokuhambisa. Ngaba ngekhe kubengcono kakhulu ukuba yonke into ibizenzekelayo ngaphandle kongenelelo lwencwadi kwaye kungekho bavavanyi baphakamisa iincukuthu ukunqanda ukukhutshwa?
Inxalenye yengxaki xa abavavanyi babonwa njengeebhotile kungenxa yokungabikho kobunini bekhwalithi phakathi kwabaphuhlisi. Ukuba wonke umntu uziva ngokwenyani ukuba banoxanduva lomgangatho wemveliso (hayi ikhowudi nje) ke abaphuhlisi kunye nabavavanyi basebenzela kwinjongo enye.
Abavavanyi banokubhangqa kunye nabaphuhlisi ukuze babhale iimvavanyo ezingcono zeyunithi kwaye abaphuhlisi banokunceda abavavanyi ngokubhala iitshekhi ezizenzekelayo kwaye bafundise abavavanyi malunga nokwakhiwa kwesicelo ukuze bakwazi ukuyila iimvavanyo ezifanelekileyo zokufumana iindawo ezinokuthi zaphule ngexesha lokuvavanywa kwenkqubo.
Kwilizwe elifanelekileyo, abavavanyi akufuneki bafumane naziphi na iziphene, okanye ubuncinci iziphene. Xa kukho 'iqela le-QA' elinomsebenzi kukufumana iziphene, kuyalinga abaphuhlisi ukuba bathembele kubavavanyi ukuba bafumane zonke iziphene ngelixa abaphuhlisi begxila kuphuhliso nakwikhowudi.
Ngelixa intshukumo ye-Yahoo yokuphelisa isebe le-QA kunye novavanyo ikhuthaza abaphuhlisi ukuba bathathe ubunini bemveliso, ayikakulungeli ngokwaneleyo ukuqinisekisa imveliso eyomeleleyo. Sele uyithethile loo nto, nokuba uneqela labavavanyi awunakuqinisekisa ngesoftware engenasiphazamiso, kodwa okubalulekileyo kukuqinisekisa ukuba isoftware ijongiwe kwiindawo ezahlukeneyo zokujonga nakwiindlela ezahlukeneyo kwaye kulapho kuluncedo lwangempela lokuba Umsebenzi olungileyo weQA (ngokuchasene neqela leQA) uyeza.
Abavavanyi banokuqinisekisa ukuba abaphuhlisi balandela ezona ndlela ziqinisekileyo zokuqinisekisa umgangatho kwaye bancedise kuyilo lobuchwephesha kunye novavanyo lweshishini ukunceda ekuchongeni ezona bugs ziphambili ngaphambi kokukhupha isoftware.
I-iphone 5s vs inqaku 3
Ngaba i-128GB yanele kwi-Galaxy S20? Ngaba i-256GB okanye i-512GB ye-Galaxy S20 ixabisa?
Njani-uku: Umsuka kwaye uvule iVerizon yakho ye-Samsung Galaxy S4
Umda we-Samsung Galaxy S7 ungabonakala ngathi uphila iiyure ezili-16 phantsi kwamanzi
Imephu zikaGoogle umkhombandlela wokuqhuba uluhlaza
Uyifaka njani i-Android 6.0 Marshmallow boot animation kwiNqaku 4
I-Facebook Messenger yongeza umnxeba wevidiyo yasimahla kumazwe ali-18